အဆိုပါဖွင့်လှစ် ACCDB FORMAT နဲ့ - ဖိုင် FORMAT - 2019
ACCDB မကြာခဏတက်တက်ကြွကြွဒေတာဘေ့စစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို အသုံးပြု. အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူ files ။ ဒီ format နဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ - အခြား Microsoft က Access ကိုဗားရှင်း 2007 ခုနှစ်နှင့်အထက်အတွက် created တစ်ဒေတာဘေ့စအဖြစ်။ သင်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အခြားနည်းလမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဤ extension တွေနဲ့ပွင့်လင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုမည်သို့အချို့ Third-party browser များနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာရုံးအစုံကိုငါသိ၏။ ကြည့်ရှု databases ကိုများအတွက်အထူးပြုအစီအစဉ်များနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ CSV ပုံစံကိုဖွင့်
Method ကို 1: MDB Viewer ကို Plus အား
တစ်ဝါသနာအိုးအဲလက်စ် Nolan အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လျှောက်လွှာ။ ကံမကောင်းစွာပဲရုရှားဘာသာစကားသည်မဟုတ်။
MDB Viewer ကို Plus အား Download လုပ်ပါ
Program ကိုဖွင့်ပါ။ အဓိက window ထဲတွင်မီနူးကိုသုံးပါ "File"selection ရသော "ပွင့်လင်း".
ထဲမှာ "Explorer ကို" သငျသညျဖွင့်လှစ်လိုသည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူဖိုင်တွဲသွားလာ, အမောက်စ်နဲ့ကလစ်နှိပ်နှင့်အတူတစ်ချိန်ကနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကကို select "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါဖိုင်အစီအစဉ်၏ Workspace ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရုရှားမူပြောင်းခြင်း၏မရှိခြင်းမှတပါးနောက်ထပ်အားနည်းချက်, - အစီအစဉ်ကိုအင်ဂျင်စနစ်က Microsoft က Access ကိုဒေတာဘေ့စ Engine ကိုဒေတာဘေ့စလိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီ tool ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြန့်ဝေနေသည်နှင့် Microsoft ၏တရားဝင် website ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: Database.NET
သင့်ရဲ့ PC ကို on installation ကိုမလိုအပ်ပါဘူးနောက်ထပ်ရိုးရှင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တမတူဘဲ - ရှိရုရှားဘာသာစကား, သို့သော်ဒေတာဘေ့စဖိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်အလုံအလောက်တိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: လျှောက်လွှာများ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး, သင်နောက်ဆုံးဗားရှင်း .NET.Framework install လုပ်ရပါမည်!
Program ကိုဖွင့်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ကြိုတင်ဝင်းဒိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာ Menu ကို "User interface ကိုဘာသာစကား" install "ရုရှား"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
Menu ကို: main window ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, sequence ကိုအတွက်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါ "File"-"ချိတ်ဆက်ပါ"-"Access ကို"-"ပွင့်လင်း".
အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးကထပ်မံ algorithm ကိုရိုးရှင်း - ပြတင်းပေါက်၏အားသာချက်ယူ "Explorer ကို" , သင့်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူ directory ကိုသွားပါက select လုပ်ပါ, နှင့်သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကဝင်ရောက်ဖို့။
အဆိုပါဖိုင်အလုပ်လုပ် window ၏ဘယ်ဖက်ခြမ်းတွင်သစ်ပင်အမျိုးအစားထဲမှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ကဏ္ဍ၏ ်. , သင်ကရွေးချယ်ရမည်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ, select လုပ်ပါရန် "ပွင့်လင်း".
အလုပ်လုပ် window ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်အမျိုးအစားရဲ့ contents ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ application ကိုတဦးတည်းလေးနက်အားနည်းချက်ရှိပါတယ် - ကအဓိကအားဖြင့်အထူးကုထက်သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီအတှကျ interface ကိုအတော်လေးခက်ခဲသည့်ကိစ္စနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသိသာကိုကြည့်မထားဘူး။ သို့သျောလညျးကိုအနည်းငယ်အလေ့အကျင့်အပြီးပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုရဖြစ်နိုင်သည်။
Method ကို 3: LibreOffice
တိုးချဲ့မှု ACCDB နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတံ့သော LibreOffice အခြေစိုက်စခန်း, - မိုက်ကရိုဆော့ဖမှအခမဲ့ Analog စရုံး suite ကို databases ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဘို့ program တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။
program ကို run လိုက်ပါ။ Wizard ကိုဒေတာဘေ့စ LibreOffice ပုံပေါ်ပါတယ်။ checkbox ကို Select လုပ်ပါ "ရှိပြီးသားဒေတာဘေ့စချိတ်ဆက်ပါ"ထိုအ drop-down menu မှာ "Microsoft က Access ကို 2007 ခုနှစ်"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်".
ဖွင့်လှစ် "Explorer ကို"နောက်ထပ်အရေးယူ - ဒေတာဗေ့စသည့် ACCDB ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သည်အဘယ်မှာရှိ directory ကိုသွားပါက select လုပ်ပါနှင့် button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် app ကိုမှထည့်သွင်း "ပွင့်လင်း".
ကလစ်နှိပ်, ပြတင်းပေါက်ဒေတာဘေ့စ Wizard ကိုပြန်လာ "Next ကို".
ပြီးခဲ့သည့်ပြတင်းပေါက်မှာ, စိုးမိုးရေးပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုအပ်သည်အတိုင်း, ဘာမှဒါရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
ယခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာ - ထို program ကြောင့်ယင်း၏အခမဲ့လိုင်စင်, ACCDB တိုက်ရိုက်နှင့် format တစ်ခု ODB သူတို့ကို Pre-ပြောင်းပေးတိုးချဲ့မှုနှင့်အတူပွင့်လင်းမပေးဖိုငျပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ယခင်ခြေလှမ်းများပြီးနောက်သင်သစ်ကို format နဲ့ file ကို save ဖို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်မီ။ မဆိုသင့်လျော်သောဖိုင်တွဲများနှင့်အမည်အားကို Select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save".
ဖိုင်ကိုကြည့်ရှုဘို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး tabular format နဲ့သီးသန့် algorithm ကိုမရရှိနိုင် display ကိုအလုပ်၏သဘောသဘာဝကြောင့်။
ထိုကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်များ၏အားနည်းချက်များကိုသိသာများမှာ - ကသာ tabular data တွေအတွက် Display ကို option ကိုအများအပြားအသုံးပြုသူများအတားကြလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောဖိုင်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း။ စကားမစပ်အခွအေန OpenOffice နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမသည် သာ. ကောင်း၏ - လုပ်ရပ်များ၏ sequence ကိုနှစ်ဦးစလုံး packages များအဘို့တူညီကြောင်းဒါကြောင့်, ထို LibreOfis ကဲ့သို့တူညီသော platform ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
Method ကို 4: Microsoft က Access ကို
သငျသညျကို Microsoft ရုံးအထုပ်ဗားရှင်း 2007 ခုနှစ်ကနေတရားဝင်လိုင်စင်ရှိသည်နှင့်အကြာတွင်တာဝန်ဖွင့်လှစ်သည့် ACCDB file ကိုသင်တို့အဘို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက - ဤ extension တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးသောမူရင်းလျှောက်လွှာ, ကိုအသုံးပြုပါ။
Microsoft က Access ကိုဖွင့်ပါ။ အဓိက window ထဲတွင်ကို select "အခြားဖိုင်တွေဖွင့်ပါ".
လာမယ့် window ထဲတွင်ကို select "ကွန်ပျူတာ"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်".
ဖွင့်လှစ် "Explorer ကို"။ ဒါဟာပစ်မှတ်ဖိုင်၏တည်နေရာကိုသွားပါက select ပြီးသင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်။
အကြောင်းအရာသင်လုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္တုအပေါ်ကို double-click လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်အားဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
ဒီနည်းလမ်းကိုအတွက်အားနည်းချက်, တစ်ဦးတည်းသာ - မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှရုံး suite ကိုပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ACCDB format နဲ့တစ်ဦးဒေတာဘေ့စဖွင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့သင့်လျော်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကိုရေးဖို့ - သင်က extension ကို ACCDB နှင့်အတူဖိုင်တွေဖွင့်နိုင်သည်ကိုကအခြားရွေးချယ်စရာအစီအစဉ်များကိုသိလျှင်။
ဗီဒီယို Watch: Dica de Access - Convertendo ACCDB em MDB (အောက်တိုဘာလ 2019).